१५ वर्षकी किशोरीले गरिन् नाबालक भाईको योजनाबद्ध हत्या – NawalpurTimes.com
प्रकाशित : २०७८ असार २४ गते १८:२१
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–१ ब्लक नं. ८ का दिलिप बिष्टका साढे तीन वर्षका नाबालक छोरा विवेक बिष्टको योजनाबद्ध ढंगले हत्या गरिएको खुलेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले आज टीकापुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी घटनाका बारेमा जानकारी दिएको छ।
कैलालीका प्रहरी प्रमुख एसपी विश्व अघिकारीले हालसम्मको अनुसन्धानले हत्यामा मृतक नाबालकको दिदी नातापर्ने १५ वर्षकी किशोरीका सकुन्तला (नाम परिवर्तन) को संलग्नता रहेको देखाएको जानकारी दिए। उनी हाल प्रहरीको नियन्त्रणमा छिन्। प्रहरीले अर्की एक १४ वर्षकी बालिका (सकुन्तलाको साथी) लाई समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। एसपी अधिकारीका अनुसार सकुन्तलाको साथीको भने हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिँदैन।
घटना अनुसार दिदी नातापर्ने सकुन्तलाले मृतक नाबालकलाई खेल्न जाने भन्दै असार २१ गते बिहान ११ बजे आफूसँगै लगेर गईन् उनीहरु छिमेकी समेत हुन्। उनले नाबालकलाई खेलाउने बहानामा डोर्‍याउँदै जमरा कुला तर्फ लगिन्। उनीहरुको घर र जमरा कुलो झण्डै एक किलोमिटरको दूरीमा छ।
उनले विवेकलाई घरभन्दा केही पर रहेको जामुनको बोटबाट जामुन टिपेर खुवाईन्। त्यसपछि उनीहरु कुलातर्फ हिँडे। कुलाको किनार नपुग्दै बाटोको छेउमा बालबालिकालाई खेल्नका लागि फलामको पिङ बनाईएको छ। उनले विवेकलाई त्यहाँ पिङ खेलाइन्। उनीहरु पिङ खेलिसकेपछि फेरि कुलाको किनारतर्फ हिँडे।
आफ्नो घरबाट निस्केकी उनी त्यसपछि अन्य चारजना साथीहरुको घरमा पुगेकी थिइन्। ती मध्ये दुईजनाले बजार पुगेर चाँदीको बाला बेच्ने प्रयास गरेको कुरा अनुसन्धानका क्रममा देखिएको एसपी अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार चाँदीको बाला बेचेर दुवैजनाले काठमाडौं जाने सल्लाह गरेका थिए।
सकुन्तलाले सुरुमै घटनालाई अन्यत्र मोड्न खोजेकी थिइन्। उनले जामुन खाएर फर्किने क्रममा आफू साथीको घर किताब लिन गएको र भाई समेत आफ्नो साथीको घर खेल्न गएको भनेकी थिइन्। उनले नाबालककी आमालाई विवेक साथीको घरमा रहेको जानकारी दिएकी थिइन्।
प्रहरीलाई सकुन्तलाले चाहेर पनि अन्त मोड्न सकिनन्। उसले बालकको खोजी र अनुसन्धानलाई एकसाथ अघि बढायो। प्रहरी सकुन्तलाको कुराबाट विवेकको शव कुलोमै छ भन्ने कुरामा निश्चित भैसकेको थियो। प्रहरीले कुलोको पानी मुहानबाटै थुनेर सुकायो।
प्रहरीले असार २३ गते साढे ५ बजे घटनास्थलबाट करिव ५ किलोमिटर तल टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ४ बाघमारास्थित कुलोमा नाबालकको शव भेटाएको थियो। उनको शव पानीमा रहेको बेतको झाडीमा घोप्टो परेको अवस्थामा भेटिएको थियो।
सकुन्तलाले पारिवारिक रिसिईबीका कारण विवेकको योजनाबद्ध ढंगले हत्या गरेको प्रहरीले दावी गरेको छ। एसपी अधिकारीले थप दुईजना शंकाको घेरामा रहेको र घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान भैरहेको जानकारी दिए। ‘हत्यामा अन्य कुनै पक्ष पनि संलग्न छ कि भनेर अनुसन्धान भैरहेको छ’, एसपी अधिकारीले भने,‘हामी अनुसन्धानको क्रममै छौं।’-नागरिक न्युज